Saxafiyiin lagu eedeeyay inay khalkhal gelinayaan amniga gobolka
By AxadleTM On Oct 29, 2019
Afar weriye oo ku sugan Burundi iyo darawalkooda ayaa Sabtidii lagu eedeeyay inay khalkhal gelinayaan amniga gobolka, sida laga soo xigtay wargeyskooda iyo Kooxaha xuquqda adanaha.
Suxufiyiinta Iwacu, oo ka mid ah ururo warbaahin gaar loo leeyahay oo ku haray Bariga Afrika, ayaa horaantii toddobaadkan lagu qabtay gobolka Bubanza, ee waqooyiga-galbeed ee Burundi, halkaas oo ay u tegeen inay ka warbixiyaan isku dhacyada u dhexeeya ciidamada iyo koox fallaagada ah.
Suxufiyiintan ayaa ku sii jeeday Kibira keymaha keydka dabiiciga ah, halkaas oo laga soo sheegayo in dagaallo u dhaxeeyay ciidamada amniga iyo fallaagada Burundi. Kooxda fallaagada ayaa saldhig ku leh dalka dariska la ah ee Kongo waxayna sheegteen mas’uuliyadda weeraradaas.
Xukuumadda Madaxweyne Pierre Nkurunziza waxay xakameysay warbaahinta xorta ah ka hor doorashada 2020. Idaacado badan oo maxalli ah iyo xarumo warbaahineed ayaa albabadda layskugu dhuftey sidoo kale weriyeyaal badanina way ka carareen dalka.
Dowlada ayaa joojisay idaacadaha ka howlgala dalka Burundi Idaacada Codka Mareykanka iyo Idaacadda BBCda. Jean Bigirimana, oo ah wariye u shaqeynayay Iwacu, waxaa la la’yahay tan iyo bishii Luulyo 2016.
Ugu yaraan 15 ayaa ku dhintey, in kabadan 500 waay ku dhaawacmeen dhulgariir ku dhuftey Turkiga
Turkiga oo bartilmaameedsanayaa Qodista shidaalka Soomaaliya
Burundi waxaa hareeyay rabshado siyaasadeed tan iyo bishii Abril 2015, markii Nkurunziza uu ku dhawaaqay inuu u loolami doono mar saddexaad xukunka dalka kaas oo lagu muransan yahay. Nkurunziza wuxuu ku guuleystay doorashadda inkasta oo mudaaharaadyo baaxad leh ay ka dhaceen, oo uu san waddanku weli xasillooneyn.
In kabadan 1,200 oo qof ayaa lagu dilay howlgalka dowlada ee lagu soo qabqabaneyey dadka mudaaharaadayey, sida laga soo xigtay UN ku dhawaad ​​350,000 oo qof ayaa ka cararay wadanka, sidaana waxaa sheegay kooxda xasaradaha aduunka u qabilsan.
Afarta suxufi ee Iwacu iyo darawalkooda ayaa la xiray ka dibna booliiska ayaa su’aalo weydiiyay ka hor inta aan lagu soo oogin “dambi ka dhan ah amni carqaladayn” iyo in loo wareejiyo Xabsiga Dhexe ee Bubanza, sida lagu sheegay barta twitter-ka ee jaraa’idka.
Lewis Mudge, agaasime uqaabilsan Xuquuqda Aadanaha ee Bariga Dhexe ayaa yiri “Suxufiyiinta madaxa banaan waxaa loo arkaa inay yihiin cadawga wadanka.” “Waxay door muhiim ah ka ciyaaraan soo gudbinta warbixinada ku saabsan xad-gudubyada sii kordhaya marka aan u dhaqaaqno doorashada 2020. Tani waxay calaamad u tahay Burundi. ”
Xisbiga talada haya ee Nkurunziza, Golaha Qaranka iyo maleeshiyaad dhalinyarada ah, ee loo yaqaan ‘Imbonerakure’, ayaa waxaay kooxaha xuquuqda adanaha ku edeynayaan dil, jirdil, kufsi iyo cabsi gelinta xubnaha mucaaradka.
AxadleTM 988 posts